ဤရထားတံတားသည်မယုံနိုင်လောက်အောင်ဗိသုကာအံ့သြဖွယ်ဖြစ်သည်. သငျသညျငါးမြင့်မားသောတိုင်ပေါ်အနားယူခြောက်လထုံးကျောက်မုတ်တွေ့နိုင်ပါသည်. တံတားသည် ၂၁၆ မီတာရှည်သော Landwasser သို့တိုက်ရိုက် ဦး တည်သည် ပြွန်ခေါင်းလမ်း.
ဤခမ်းနားလှပသောစကော့တလန်မြေမှတ်တိုင်သည်မြစ်ကိုဖြတ်ကူးသွားသည် ဘွား Queensferry မှာ, ရုံအနောက်ဘက် Edinburgh ၏.
ကသာဖွင့်ကတည်းက 409 ရှည်လျားသောမီတာ, လမ်းသွားလမ်းလာများနှင့်စက်ဘီးစီးများအတွက်တံတားတစ်ခုအပိုင်းလည်းရှိပါတယ်. ရထားပုဒ်၏အသီးအသီးအခြမ်းအပေါ်တဦးတည်းရှိတယ်. လူများသည်နေရာချလာသည် “သော့ခလောက်” အကြားခြံစည်းရိုးပေါ်မှာ လက်ရန်းတန်း နှင့်လူကူးဒေသများကတည်းက 2008.
သင်သည်သင်၏ site ကိုပေါ်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘလော့ဂ်ပို့စ် embed လုပ်ဖို့ချင်ပါနဲ့, ထို့နောက်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbreathtaking-train-bridges-europe%2F%3Flang%3Dmy - (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အောက်ကိုဆင်း)